By Ibrahim Aden Shire April 26, 2019
Seddex Tusaale oo na baraya doorka lataliyayaashu ku leeyihiin go’aanka madaxdu gaarto.
By Ibrahim Aden Shire April 19, 2019
Madaxweyne, raysulwasaare iyo wasiir kasta wuxuu leeyahay lataliyayaal farabadan. Lataliyayaashu waxay qabtaan howlo kala duwan. Qaar ayaa magaca lataliyo sito laakiin madaxweynaha boorsada kaliya u qaado, qaarka albaabka gaariga iyo ganjeelka guriga kaliya ayay furan halka qaar ay yihiin kuwa go’aannada masiiriga ah wax ka gaaro. Lataliyayaashu waxay mararka qaar madaxdooda ku matalaan shirar, waxay diyaariyaan dukumiintiyo ama waxay wakiil ooga noqdaan shaqo muhiim ah. Lataliyayaashu shaqada kuma helaan tartan ay u galeen mana aha jago dadku u simanyahay. Baddalkeeda waxaa lagu helaa sida uu ruuxu daacad ugu yahay ruuxa uu latalinayo iyo saaxiibtinnimada kala dhaxayso. Inta badan madaxda ayaa lataliye u magacawdo shaqsiyaadki ugu kaalmeeyay inay xilka ku guulaystaan. Lataliyayaashu kala awood badan una kala dhow madaxdooda. Tusaale, Karl Rove waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa maskaxdi uu ku shaqaynayay madaxweyne Buushki yaraa. Si la
By Ibrahim Aden Shire April 13, 2019
Every leader, every minster and every institution of modern governance has many advisors. These advisors hold different roles and responsibilities in the government ranging from bag carriers and door openers to being at the centre of the government’s policy and decision-making. Their appointment is patronage and not open to all thus, ministers or leaders choose their close friends or people who helped them win and maintain office as advisors to reward for their support. Advisors act as proxies for their respective ministers or bosses by attending meetings, preparing documents and even hearing representations. Some are more powerful than others are and some are more close to the leaders thus, more influential in decision-making and policy settings. Karl Rove, for example, was known as the brain of President George W Bush while Farah Abdul-Kadir was known as the man behind the scene during Hassan Sheikh’s presidency. However, advisors are more influential than most of us know. In
Soomaaliland Eed ma leh inta Koonfur sidatan u dhaqmayso
By Ibrahim Aden Shire April 05, 2019
Inta aanan guda galin dooddayda aan labo arrimood sii hormarsado. Tan koobaad waa in hadalka aan halkaan kusoo gudbin doono uu yahay aragtidayda shaqsiyadeed sidaas awgeedna aanan cidna ku matalin. Tan labaad waa inaan aaminsanahay Soomaali-weyn. Taasi waxay ka dhigantahay in aanan marnaba ka raalli noqon karin inta hartay oo sii kala tagto. Soomaalidu waa dad tiro ahaan aad ooga yar dhulka ay dagganyihiin. Gobalka walba oo dhul weynaha soomaaliyeed ka mid ah inta ku nool toban jibberkeed ayuu qaadi kari lahaa balse dad buuxiya lama hayo. Dhinaca kale waxaa dul yaxoobo dadyow aad u tiro badan oo dhulku cariiri ku yahay. Dadkaasu dhulka bannaan ee u dhow waa ay arkaan una hanweynyihiin. Sidaas awgeed isla joogidda waxay kaalmayn in cudud xooggan oo laga cabsado aan yeelanno. Halka kala taggu uu sahlayo in midba dhinac loo cuno innaga oo aan isu gurman karin. Tusaale waxaa noo ah Jabuuti marki ay kusoo duushay Eritareeya. Uma aannan diri karin ciidan, xataa afka kama sheegi karn
Warbixin Kooban. Safarkaygi Gobalka Gedo. Q5
By Ibrahim Aden Shire April 03, 2019
Qormadi inoo danbaysay waxaan ku sheegnay inaan ku xijin doonno adeegyada biyaha iyo korontada. Waxaan si gaar ah ugu xusayaa labadaan adeeg muhiimmadda gaarka ah ee ay u leeyihiin nolosha aadanaha iyo inay halbeeg u yihiin horumarka ummadi samaysay. Dabka Gobalku horumar muuqdo ayuu ka sameeyay xagga quwadda dabka. Inta badan magaalooyinka waaweyn waxay leeyihiin koronto joogta ah oo hal shirkad ay bixiso. Baladxaawo iyadu waxaa ka howl galo labo shirkadood oo marki hore hal ahaa haddase labo u kala baxay. Shacabku wuxuu helaa koronto joogta ah oo la isku hallayn karo. Sidoo kale, dagmada Luuq ayaa iyaduna intaan gobalka joogay loo dhammaystiray galinta dabka iyadoo heshay quwad koronto oo si joogta ah la isugu hallayn karo. Garbahaareey oo muddo dheer qabtay baahi koronto ayaa iyaduna hadda shaqo wanaagsan ka socotay. Waxaa gabo gabo marayay xiridda koronto saacad walba ah. Awal (xataa intaan anigu joogay) korontadu waxay joogtay saacado kooban oo waliba aad u yar
Warbixin Kooban. Safarkaygi Gobalka Gedo. Q4
By Ibrahim Aden Shire March 31, 2019
Waxaa ku jirnaa arrimaha bulshada. Tii inoogu danbaysay waxaan soo taabannay adeegga caafimaadka kaas oo sawir taban aan ka bixinnay. Hasa yeeshee meelo badan oo waxaa jiro horumar fiican uu ka jiro sida isboortiska. Garbahaareey waxaa ka dhisan siddeed naadi oo heer koowaad ah. Si joogta ah ayaa loo cayaaraa oo markuu xilli dhammaadaba dib ayaa loo billaabaa. Kooxaha koob ayaa loo dhigaa lacag ah. Inta badan waa $100 qiimaha abaalmarintu marmarna inuu ka bato ayaa laga yaabaa. Kooxdi qaaddo koobka ayaa meel fagaare ah lagu guddonsiiyaa abaal marinta. Ciyaarahaan waxay ka dhacaan garoonki kubbadda kacta ee dagmada oo saddex sano ka hor la dayac tiray. Garoonka oo loo dhisay darbi daawadayaashu fadhiistaan ayaa aad loo soo cammiraa. Maalinta ay jirto cayaarta kama danbaysta ah waa la buux dhaafiyaa. Waxaa xusid mudan in dad ugu badan ee cayaaraha daawado ay ka mid yihiin ciidanka. Waxaad arkaysaa iyagoo tuutahooda xiran qoryana sito oo shacabka dhex fadhiya. Dadka ugu yar ee
Warbixin Kooban. Safarkaygi Gobalka Gedo. Q3
By Ibrahim Aden Shire March 27, 2019
Qormadi inoo danbaysay waxay ku saabsanayd amniga. Laakiin waxay inaga soo dhexgashay qodobbo arrimaha bulshada ahaa oo inoo socday. Waxbarshada ayaan si kooban ooga hadalnay. Iskoollada maadiga lagu barto iyo goobaha diinta loo diraaseeyaba inay buuxaan ayaan soo sheegnay. Waxaan ka daba gaynayaa in goobaha diinta lagu barto ay aad u ballaaranayaan. Tusaale, waxaa soo socda qorsha ballaarinta machadka Imuumu Dahabi ee Garbahaareey oo dhawaan inuu bilowdo la filayo. Haddii lagu guulaysto waxa uu qorshuhu yahay in la dhiso dhismo dabaq ah oo mati galin karo kun arday ka badan hal mar. Waxaa sidoo kale lagu wadaa in masjikd jaamica ee Garbahaareey gabi ahaanba dhulka la dhigo si loo waasicyo. Masjidku waa udub dhexaadka aqoonta islaamka ee gobalka. Waa meesha ay fadhido xerta kunka ku dhow ee kutubta raacato. Waa meesha salaadda jumacaad sidoo kale lagu oogo. Haddaa waa uu qaadi la'yahay baahiyahaas, waxaana u ilmaynayaa ballaarin taasoo howsheedi lagu jiro. Caafimaadk
Qormadi hore waxaan kaga soo hadalnay in ree baladnimadu kobacday, dhismayaasha iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo aan waxbarashada kasoo qaadannay. Waxay ahayd inaan ku xijiyo caafimaadka iyo adeegyada kale balse waxaa igu soo noqnoqday codsi ah inaan wax ka iraahdo ammaanka gobalka iyo waxaan soo arkay. Qodobkaas ayaan maanta gorfayn doonaa hadduu Eebbe idmo. Gobalka waxaa laga galaa dhulka ama cirka. Inta badan magaalooyinku waxay leeyihiin garoomo diyaaradeed oo shaqeeyo. Doolow ayaa ugu caalaminsan oo duullimaad maalin walba ah leh. Baardheere iyo Garbahaareey ayaa soo raaco. Buurdhuubo iyaduna marmar waa laga dagaa haddase dib u habayn ayaa garoonkeeda ku socdo in duullimaadku hagaago ayaa suuragal ah. Cid walba oo hawada marto cabsi badan ma qabto. Laakiin haddii dhulka la maro waa howlo badan tahay. Dadka qurbaha ka tago inta badan Mandera ayay Gedo ooga gudbaan. Xadku rasmi ahaan waa uu xiran yahay. Hasa yeeshee si caadi ah ayay la isugu gudbaa. Askarta Kii
Waxaan safar gaaban ku gaaray gobalka Gedo, gaar ahaan magaalooyinka Baladxaawo iyo Garbahaareey. Safarkaan oo qaatay inti u dhaxaysay 16/02/19-09/03/19 ayaan intiisa badan joogay dagmada Garbahaareey ee caasimada gobalka Gedo. Intii aan joogaay dagmadaas waxaan u kuurgalay horumarrada iga danbeeyay iyo waxa iska baddalay nolosha dadka. Ree balad Arrinta koowaad ee isoo jiidatay ayaa ah in magaaladu ballaaratay. Waxaa ku darmaday in ku dhow inti ay awal ahayd. Sidoo kale waxaa kobcay tirada dadka ku nool inkastoo wali aysan helin caddadki ay qaadi kari lahayd. Dadka badan ee soo buuxshay magaalada waa midkii dagganaa miyageeda. Dadkii xoola-dhaqatada ahaa ayaa soo xarooday oo ree balad noqday. Arrintaan waxay la qabtaa dagmadu qaaradda Afrika oo ree magaaloobiddu aad u kobcayso. Bankiga adduunka ayaa ku warbixiyay, qaaradda Afrika, in dadka magaalooyinka dagayo ay kobcayaan 3.5% sanad walba. Sidoo kale Bankigu wuxuu sheegay in inta u dhaxayso 2010 iyo 2025'ka caa
Safarkaygi Garbahaareey wuxuu mar kale i baray qiimaha gabdhaha Soomaaliyeed.
By Ibrahim Aden Shire March 17, 2019
Dadnimada haweenka soomaaliyeed waa mid horay loo sajalay. Caddaan iyo madow, gaal iyo islaam cid walba oo u kuur-gashay nolosha dadka soomaaliyeed waxay qarrireen in haweenka soomaliyeed raggooda ka waxtar badan yihiin. 163 sano ayaa laga joogaa marki Richard Burton, oo maray bariga Afrika, uu qoray sidatan “awoodda jireed iyo adkaysikaba, haweenka Soomaaliyeed aad ayay ooga sarreeyaan raggooda. Guriga marki la joogo waxay qabtaan dhammaan howlaha guriga… marki la guurayo shaqadooda kala duwan oo mid buux dhaaftay. Waxay raraan awrta, garwadaan ugu danbayna ka furaan [heeryada marki la gaaro meeshi loo guurayay]. Waxay dhisaan aqallada, waxay soo guraan xaabada, waxay soo arooraan biyaha waxayna kariyaan cuntada”. Inta uu sheegay dhul mareenkaas waa mid aan anigu soo gaaray ilaa maantana ay la noolyihiin inta miyaga wali joogto. Marki ree baladka la noqday howl-karnimadaas ma noqon mid miyigi looga yimid balse way sii korortay. Qaybtoodi iyo tii raggaba iyagaa isku qabt
Waxaan safar ku joogay baryahaan dagmada Garbahaareey ee gobalka Gedo. Maalinti shalay ahayd waxaa dhagtayda kusoo dhacay hadal la hayay oo Qur'aan akhris ahaa. Waxaan sheekadi ka helay in ujeedku yahay duco iyo xirsi-xir loo sameeyo soomaalida qurbaha ku nool. Waxaan jeclaystay inaan wax badan ka ogaado waxaana codsaday in maanta aan ka qayb galo Alla bariga taasoo la ii ogolaaday. Salaaddi Casar ka dib ayaan tagay goobta la ii sheegay in muraadku ka dhacayo. Waxaan koox koox u yimid wadaaddadi ducayn lahaa. Waxaa soo xaadiray 21 wadaad oo dhalinyaro aan labaatan gaarin u badan. Waxaa la keenay cunno fudud sida bun, daango, timir iyo cabbitaanno kala duwan. Cunto ka dib waxaa naloo qaybiyay boqol boqol kun oo Soomaalli ah. Waxaana la yiri akhriya waxaad kartaan oo Qur'aan ah duceeyana. Waxaa loo duceeyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ducadina waxaa lagu khatimay qurba-joogta oo aad iyo aad loogu duceeyay in Eeebbe dhowro iyaga iyo caruurtooda. Waxaan codsaday in
Maxaa iiga baxay shirki dhallinyaro ee aan abid uga qayb-galo Soomaaliya
By Ibrahim Aden Shire February 20, 2019
Xalay waxyar un salaadda maqrib ka dib, ayaa waxaa acanta I qabta y wiil dhalinyaro ah oo madax u ah qalin- maalka magaalada . Wuxuu iga codsaday inaan kala qayb galo kulan xog-waraysi ah oo ay leeyihiin saacaddaas waana aqbalay laakiin wa xaan ka cudur-daartay in la igu daro dadka kalmadda ku leh . H alkaan waxaan ku tuuro-goyn doonaa waxy aabihi aan is iri il- qabad togan ama taban ayay leeyihiin ee dhacay intuu kulunku socday . Kulunka waxaa ka qayb- galay lix iyo toban saddex dumar yihiin iyo aniga oo korjoogto ahaa . Mid ma ogiye inta kale waxay wada haysteen shahaadooyin ilaa heer jaamacadeed ah una badan heerka koowaad . Waxaa meesha lagu xusay inay ilaa afartanha yihiin dhalinta kas oo baxday jaamacadaha ee baladka joogo . Intii xaadirtay kulankaas afar mooyee inta kale wax un camal ah aya
Muna maanta waa sideed iyo toban jir, waa gashaanti dhamaystiran gugii kaba ka roor iyo kalayaacii ayay ku dhalatay duleedka tuulada qax u jog, ee gobolaka Gedo. Waagay yarayd hooyadeed Saxarla Guure, waxay ka maqli jirtay gabadhayda Muna, waa falxad sanadkay dhalatay gu’ samaad buu ahaa, adhigii noo dhalay waxaruu wada dhalay, geelii noo dhalayna nirguu wada dhalay, hal mid ah na kama af qudhmin oo si fiican bay da’daasu u hana qaadday. Laakiin Muna arrintaas hooyadeed sheegtay ma hubto dhabnimadeeda wali wax mucjisa ah iskuma ay arag. Waa barqo duhur xigeen ah waxay hoos taagantahay geed Tincad ah, si qasad la aan ah ayay indheheedu laamaha geedka iyo ubaxa saaran ugu duldhacayaan. Xasuus badan ayaa maankeeda si fasax la aan ah u soo weeraraysa. Dhacdooyin badan oo muruga leh ayaa ka sheeda ka soo maaxaya, waxaase ugu daran labo dhacdo oo sigaar ah iyada u taabtay tiiranyo iyo muruga badana ku reebay midi do
Ilaa shalay waxaa baraha bulshada lagu faafinayay in isbitaalki Jaalle Siyaad ee dagmada Garbahaareey loo rogay meel ganacsi. Saaka warki asaga ahaa waxaa qoray qaar ka mid ah mareegyada warfaafinta ee Soomaalida. Dadka qoray warkaan qaar waxay isticmaaleen erayo adag sida 'dhiig miirato', 'furasho' iyo 'boob'. Inkastoo aan la xariiray qaar ka mid ah dadka qoray farriimahaan aana isku dayay inaan si hoose xal ugu helo warkaan aan salka lahayn, haddana waxaa ii muuqato inuu dhawaqu meel fog gaaray hoos u hadlidna aysan ku filnayn. Sidaa darteed waxaan go'aansaday in si muuqato wax ooga dhaho warkaan oo aan ahayn kii ugu horreeyay ee noociisa ah. Muxuu yahay Isbitaalka Jaalle siyaad? Jaalle Siyaad waa isbitaal weyn oo ku yaal Garbahaareey. Waxaa dhismihiisa bilowday dowladdii dhexe isagoo qaybo ah ayayna dhacday. dhowr iyo labaatan sano ayuu qabyadaas ahaa oo arigu u xaroon jiray. Waqti aan fogayn ayay gabdho qurbajoog ah isu xilqaameen inay
Cabdiyo Miigagne, maalintii la kufsaday hadda waxaa ka soo wareegtay 12 bilood. Mudadaas waxay u dhaxaysay isbitaalo, qaar dalka gudihiisa ah iyo dibada. Cabdiyo maalintii askarta Kenyan-ka ah kufsadeen 16 sano jir bay ahayd. Waxay ahayd gabadh si wacan loo soo koriyey, xannaano aabe iyo naxariis hooyo ayay ku soo barbaartay. Quruxda waxay ka raacday hooyadeed Saxarla Guure, waa joog dhexaad itaal dumar oo wacan Rabbi ku mannastay, si kale wax kuma garatide waa qalanjo qurux la soo ka caysa. Waa gabadh han weyn, isuma quudho meelaha hoose, ragga xod-xoda doonka ah ama faduuliya qaarbeyna salaanta ka qaadin. Nin ay maalin xantiisa ama xumaan laga sheegayo maqashay jubudhu uma tiraahdo, uma furto umana xidho, waa sabaabtaa midda dhalinyaro badan u la colloobeen uguna si feeyaan mid qab iyo islaweyni dilay. Waxay ku riyootaa iyadoo halyey guursaday, gaaf wacanna loo tumay oo hooyo noqotay, iyadoo ubad inta dihatay misana daadaha
Qormadaan waxay daba socotaa middii asbuucii hore aan kaga hadlay faqriga dhibka uu leeyahay marki aad aragto https://ibrahim-shire.blogspot.co.uk/2018/03/dhaawaca-ugu-weyn-ee-saboolnimadu-ay.html Markaan akhriyay faallooyinki ay dhiibteen akhrisristayaashu waxaa ii muuqatay in akhristayaasha intooda badan ay u fahmeen si ka duwan sidaan u waday. Sidaas awgeed ayaan qormadaan oo ah qaybtii labaad ee tii hore u baddalay ciwaankeeda. Ujeedka qormada ayaa ahayd inay iftiimiso dhibka uu leeyahay faqriga marki aad dareento inaad faqiir tahay. Waxaan soo tilmaannay in dadka faqriga arko ay noqdaan qar-iska-tuuro u bareero qataro badan. Waxaan soo sheegnay in qofka dareemayo inuu faqiir yahay uusan waxba meel dhigan kana fakerin waxa barri imaan doono. Haddaba yaa faqiir ah? Waa sidee dareenka kuwa wax haysto? Ma jiraa caddad hantiyeed oo haddii la helo laga baxo faqriga? Maxaa keeno in qofku arko ama dareemo faqriga? Su
Sanadki hore dhammaadkkisi ayaa qormo lagu daabacay bolooggaan waxaa lagu magac-dhabay Ibnu Dhufayl. Ma uusan ahayn ruux aan horay u maqlay. Waxaan jeclaystay inaan wax badan ka ogaado. Akhris badan ka dib waxaan ogaaday inuu ahaa sheekh meelo badan in looga daydo mudan, gaar ahaan jeceylka uu aqoonta u qabay iyo dadaalki uu galiyay raadinteeda. Sidaa darteed waxaan jeclaystay inaan la wadaago dhalinta Soomaaliyeed ee marki ay hal maaddo bartaan isu maleeyo inay waxba u harin si ay u ballaariyeen raadinta cilmiga siduu uu Ibnu Dhufayl-ba u kulmiyay culuum badan oo kala duwan. Ibnu Dhufeyl waa Faylasuuf saynis yahan iyo dhaqtar muslim Carab ah. Waa mid kamid ah maanshiilayaasha Carbeed Ee magacoodu uu sida aadka ah u baahay. Wuxuu dhaxal ahaan u reebey buugaag badan oo uu ka qoray falsafada, suugaanta Carbeed, xisaabta, meeryaasha iyo caafimaadka. Magaciisu Waa Abuu Bakar, aabihii waxaa la oran jiray Cabdi Malik Maxamad. Qabiil ahaan w uxuu kasoo Jeedaa qabiilka carbeed Ee Qey
The title I choose for this article is millennia old Chinese saying. It is a proverb exercised in China throughout its civilisations to date. In this short article, I will try to present how China practically employed this proverb and how this habit played a crucial role in china’s economic and social development in recent history. Comparatively, I will put forward how boastfully displaying our ability and smartness hindered our development and led us to a self-inflicted calamity. China has been in the lead of human civilisation for thousands of years. It is considered to be the mother of all technologies particularly the modern ones. They were the first to invent true gunpowder; canon was used by Ming to topple down their Mongol rulers in the 14 th century. Movable printers were in place since 11 th century thus allowing publications of hundreds of books and creations large libraries in the country. In addition, it has been the most populous country in the world through the rec
Aadanuhu waa is baddal u joog. Wuxuu tartan kula jiraa isbadalka Rabbaniga ah ee ku dhacayo bii’ada uu ku noolyahay. Qowmiyaddi la socon waydo xawaaraha isbaddalku ku socdo waxaa ku dhaco dib u dhac ka reebo dunida kale. Guud ahaan caalamka islaamka waxaa ku yimid dib u dhac xagga horumarka iyo hoggaanka dunida ah. Dalalka saboolka ah ee dalkeennu ka mid yahay ayaa ugu sii daran. Waxay u ilmaynayaa isbaddal siyaasadeed, mid bulsho, mid dhaqaale, mid aqooneed iyo mid hoggaan. Qof walba oo aad waydiiso waxa naga dhimman wuxuu si fudud kuu dhihi isbaddal ayaa loo baahan yahay. Hasa ahaatee wax mushkilad noqotay in la fahmo cidda laga sugayo inay isbaddalka keenaan. Dadka intiisa badan waxay eegayaan madaxda iyo siyaasiyiinta oo ay ka sugayaan isbaddal dhinac walba ah. Laakiin qof wax ma baddali karaa iyada oo aysan bulshadu is baddalin? Bulshaduse yaa baddali karo yaase saamayn wax baddali karto yeelan karo? Dabcan duunyo iyo dugaag isbaddal horumarineed laga sugi mahay
Warsame waa 24 jir. Waa qoraa afka soomaaliga wax ku qoro horayna u daabacay buug ku guulaystay abaal marin sare. Qur’aanka waa uu xafidsanyahay. Dhawaan ayuu qaatay shahaadada darajada kowaad ee jaamacada. Sidaas oo ay tahay magaalo waxa uu joogaa 12 sano kaliya. Ma run baa mise waa riyo mise waa sidaan jeclaan lahayn? Ma shahaadadi Cabdalla Shideeyaa mise cilmigii Cabdi-wali ee baadiniga ahaa (wadaadki Gaalkacyo)? Intaba midna mee waa dadaal rageed iyo doonitaan Eebe iyo tusmo u furan qof walba oo doono inuu guul ka gaaro hadafkiisa. Inta aanan billaabin sheekada aan mar kale sheego in ujeedka qoraalkaan uusan ahayn ammaan iyo dhaliil toona balse ujeedku yahay cashar barasho, tusmayn iyo tusaalayn kuwa jecel inay naftooda horumariyaan, dhiirri galin kuwa uu gaariga dadaalku meel dhexe kula jabay, baraarujin kuwa aan arag awoodda Alle siiyay iyo fursadaha ay haystaan. Sidaa darteed ku aqri qalbi fayow oo diyaar u ah wacyi qaadasho iyo ku dayasho. Imaamul Ghazali Eebe ha